Medium Format ကငျမရာမြား နှငျ့ သမားရိုးကြ DSLR မြား ကှဲပွားခွားနားပုံ – Digital Photography Myanmar
HomeCameras and EquipmentMedium Format ကင်မရာများ နှင့် သမားရိုးကျ DSLR များ ကွဲပြားခြားနားပုံ
March 25, 2017 Jedi Cameras and Equipment 0
APS-C ကင်မရာလိုမျိုး ဆင်ဆာသေးငယ်တဲ့ ကင်မရာတွေနဲ့ ခင်ဗျားရိုက်ကူးလာခဲ့တာအချိန်အနည်းငယ်ကြာလာပြီဆိုရင်တော့ အကြောင်းပြချက်ကောင်းများစွာနဲ့အတူ Full Frame ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကို အိပ်မက်မက်နေမယ်ဆိုတာ အထင်အရှားပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း Full Frame ကင်မရာဆိုတာ ဓာတ်ပုံပညာမှာ နောက်ဆုံးကင်မရာတစ်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဓာတ်ပုံပညာရှင်အများစုက medium format ကင်မရာတွေကို အသုံးပြုကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုမှာတော့ ဓာတ်ပုံဆရာ ခါးလ်ထေလာ က ဒီဈေးကြီးတဲ့ medium format ကင်မရာတွေနဲ့ပက်သက်လို့ အမြင်လွဲနေတာတွေ၊ ရည်ရှည်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့် medium format ကင်မရာအမျိုးအစားက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေ စသဖြင့် ရှင်းလင်းပြောကြားထားပါတယ်။
medium format ကင်မရာတစ်လုံးကို ကောက်ကိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ သတိထားမိမှာက ဒီကင်မရာရဲ့ အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ medium format ကင်မရာတွေရဲ့အရွယ်အစားကို သာမန် DSLR ကင်မရာနဲ့ယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ Humvee ကားနဲ့ SUV ကား အတူတွဲရပ်ထားသလိုမြင်ယောင်မိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်ဆာသေးငယ်တဲ့ ကင်မရာတစ်လုံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် တစ်ကယ့်တော့ နှိုင်းယှဉ်စရာမရှိလှပါဘူး။ ကင်မရာအတွင်းက ပိုမိုကြီးမားတဲ့ဆင်ဆာကြောင် ကင်မရာရဲ့ကိုယ်ထည်က တကယ့်ကိုကြီးမားပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ဆင်ဆာကြောင့်လည်း ပိုမိုကြီးမားတဲ့ မှန်ဘီလူးလိုအပ်လာသလို အဲဒီမှန်ဘီလူးကတဆင့်ဝင်လာတဲ့အလင်းရောင်ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဆင်ဆာပေါ်မှာပိုမိုအာရုံခံမိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
lenses for medium format cameras.Medium format lenses are optically superior
ပိုမိုကြီးမားတဲ့ဆင်ဆာတစ်ခုမှာ အလင်းရောင်ကို စုစည်းဖို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ဆင်ဆာမျက်နှာပြင်ရှိတာကြောင့် သေးငယ်တဲ့ ဆင်ဆာတွေလိုမျိုး ပစ်ဇယ်တွေ သိပ်သည်းမှုကို မဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါဘူး။ ကြီးမားတဲ့ဆင်ဆာဖြစ်တာကြောင့် ပစ်ဇယ်တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ အရွယ်အစားကလည်း ကြီးမားလာပါတယ်။ ဥပမာ၊ ၅၀ မဂ္ဂါပစ်ဇယ် ဆင်ဆာတပ်ဆင်ထားတဲ့ Hasselblad CMOS ကင်မရာမှာ ပစ်ဇယ်တစ်ခုရဲ့အရွယ်အစားဟာ ၅.၃ မိုက္ကရွန်ရှိပြီး သာမန် အရည်အသွေးရှိတဲ့ DSLR တစ်လုံးရဲ့ဆင်ဆာမှာ ၄.၄၁ မိုက္ကရွန်သာရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် noise နဲ့ ပစ်ဇယ်ရဲ့အချိုးအစားမျှတဲ့အတွက် Medium format တွေရဲ့ အလင်းရောင်အားနည်းချိန် low light စွမ်းဆောင်ရည်က ပိုကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ Medium format ကင်မရာဆင်ဆာက အလင်းရောင်ကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်း ၂၈ % ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
medium format sensor size: Medium Format vs. Full-Frame DSLR Sensor Size
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ဆင်ဆာက ပိုကောင်းတဲ့ dynamic range ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး ပိုမိုတိကျတဲ့ အရောင် အသွေး နဲ့ ပိုကြီးမားတဲ့ပြတ်သားမှု တန်ဖိုးကိုပါ ရရှိနိုင်ပါစေတယ်။ Medium format ကင်မရာတစ်လုံးမှာ ပါရှိတဲ့ dynamic range က သာမန် DSLR မှာရှိတာထက် 14 stops ပိုများပါတယ်။ ဓာတ်ပုံအားလုံးကလည်း 16-bit အစစ်နဲ့ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
Dynamic range onamedium format camera is 14-stops higher.
ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ဆင်ဆာတစ်ခုမှာ ပိုမိုကြီးမားတဲ့မှန်ဘီလူးတွေအတွက် နေရာပေးထားပြီး ဒီမှန်ဘီလူးတွေက ပြုလုပ်ရလွယ်တဲ့အတွက် အဲဒီမှန်ဘီလူးအကြီးတွေရဲ့အရည်အသွေးကလည်း ထိပ်တန်းမှာရှိပါတယ်။ ဒီအားသာချက်ကြောင့် Aperture တန်ဖိုးချင်းတူတူဖြစ်ရင်တောင်မှ DSLR တွေရဲ့မှန်ဘီလူးတွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ ပိုကျဉ်းတဲ့ DOF ကို medium format ကင်မရာတွေရဲ့ မှန်ဘီလူးတွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုသေးငယ်တဲ့ Aperture ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှ ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ အရည်အသွေးက ထိပ်တန်းအရည်သွေးရှိတဲ့မှန်ဘီလူးကြောင့် ပိုမိုတိကျပြီး ယိုင်သွားတာမျိုးဖြစ်တာမတွေ့ရနိုင်ပါဘူး။
depth of field, medium format cameras, Medium format cameras produce greater depth of field.
Medium format ကင်မရာနဲ့ indoor မှာရိုက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာ တကယ့်ကိုအိပ်မက်အကြီးစားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာသီဥတုကြမ်းတမ်းတဲ့ outdoor မှာရော ရိုက်ကူးဖို့ အသုံးပြုလို့ရပါ့မလား?
ဘယ်နေရာ ဘယ်လိုရာသီဥတုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုလို့ရအောင် ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ တိုင်လာ ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာက သေချာအောင် စမ်းသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Hasselblad တံဆိပ် Medium Format ကင်မရာကို စိန်ခေါ်မှုတွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာအထိ ယူဆောင်သွားပြီး ရိုက်ကူးပြခဲ့ပါတယ်။
Taylor’s Hasselblad isaall-weather camera.
Flash နဲ့ ချိန်သားကိုက် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လျင်မြန်မှု
စတူဒီယို ဓာတ်ပုံသမားတွေရဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ ပုံမှန် DSLR တွေကို flash အသုံးပြုပြီးရိုက်ကူးတဲ့အခါ ကင်မရာနဲ့ flash အကြား ချိန်သားကိုက်ရိုက်ကူးရတဲ့ လျင်မြန်မှုမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထောက်အကူပစ္စည်းအချို့မရှိပဲနဲ့ဆိုရင် ပိုတောင်မှ ကန့်သတ်မှုတွေရှိပါသေးတယ်။ Medium format မှန်ဘီလူးတွေရဲ့ အတွင်းမှာရှိတဲ့ leaf shutter နဲ့အတူ သင့်ရဲ့ flash speed အတွက် အတားအဆီးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ပါပြီ။ ဆိုလိုတာကတော့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် strobes မီး တွေသို့မဟုတ် flash တွေကိုအသုံးပြုပြီး ပိုမိုများပြားတဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
sync-speed, medium format cameras, flash photography, The leaf shutter in theamedium format lens means there’s no flash sync-speed limitation.
Low light အနေအထား စွမ်းဆောင်နိုင်မှု
တိုင်လာကပဲ Hasselblad ရဲ့ အံမခန်း Low light အနေအထား စွမ်းဆောင်မှုကိုပါ ထပ်မံပြသခဲ့ပါတယ်။ Grain လို့ခေါ်တဲ့အစက်အပြောက်တွေ ဒါမှမဟုတ် အဲဒါနဲ့တူတာတွေတောင် ဓာတ်ပုံမှာ မတွေ့ရပါဘူး။ အောက်ပါ ပုံကတော့ ISO 800 နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၆ မီတာအရှည် မှာ ပုံနှိပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အစက်အပြောက် တစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။
Images shot withamedium format are practically noiseless.
Medium format ကင်မရာကို ပြောင်းလဲပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးက ဈေးနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကင်မရာတွေဘယ်လောက် ကောင်းသလဲဆိုတာ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို့ ဈေးလဲကောင်းတာကို သတိရပါ။ သို့ပေမယ့်လည်း ဒီကင်မရာတွေကို စံသတ်မှတ်နှုန်းတွေ ကျော်လွန်တဲ့ ပုံရိပ်တွေရရှိနိုင်ဖို့ ပုံစံထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတွက် တကယ့် ပရောဖက်ရှင်နယ်တွေက သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနဲ့ ရလဒ်တွေကိုရရှိစေဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေလို့ သတ်မှတ်ပါရစေ။
ခင်ဗျားရဲ့အိပ်မက်ထဲက ကင်မရာကရော ဘယ်အမျိုးအစားလဲ?
Ref: How are medium format cameras different than regular cameras? By Rajib Mukherjee
DJI က Hasselblad ရဲ့ ရှယ်ယာအများစုကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီဆိုတာ သေချာသလောက်ဖြစ်နေ